Blog Shop - Myanmar Blogshop - Ooredoo B to B Sim Card
Ooredoo B to B Sim Card
??လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်​ငန်းအတွင်းဖုန်း​ဘေအပိုအသုံးစ၇ိတ်​​​တွေအရမ်းများလို့​လျှော့ချချင်​ပါသလား?? Internet Data​တွေ အသုံးများ​ကာ? ☎​​ဖုန်း​ဘေ​တွေတက်​​နေလို့ အခြားplan​တွေ​​လျှောက်​တာနဲ့ေ၇ာ လုံ​လောက်​ပါ၇ဲ့လား?... မပူပါနဲ့? ​ပြည့်​ဝ​သော​စေတနာ၊အသက်​သာဆုံး Bussiness Plan များနဲ့ လူကြီးတို့၏လုပ်​ငန်းများကို အုတ်​တစ်​ချပ်​သဲတစ်​ပွင့်​ ကူညီ​ပေးဖို့ ? Ooredoo?၇ဲ့ အ၀သုံးအ၀​ပြော? Bussiness Sim Cards များကို ၀ယ်​ယူ၇ရှိနိုင်​ပါပြီ။
​အော်​..ဒါနဲ့ ချစ်​သူခင်​သူ​တွေကိုလည်း ၀ယ်​ယူလက်​​ဆောင်​​ပေးနိုင်​ပါတယ်​​နော်​✌️✌️
သာမန်​ SIM Card ​တွေနဲ့မတူ ​ပိုမိုသက်​သာ​စေတဲ့ လုပ်​ငန်းသုံး SIM Card ​လေး​တွေဖြစ်​ပါတယ်​။
1.SimCard - 1000 +++
2. Old Sim Registration - 1500 +++
Sim Cardအသစ်ဆိုရင်ဝယ်ယူထားတဲ့ planအလိုက်ဘေတစ်လစာရမယ်နော်
အား​ပေးသူမိတ်​​ဆွေအားလုံးအဆင်​​ပြေ​​စေ၇န်​ မိမိစိတ်​ကြိုက်​နှစ်​သက်​၍သင့်​​တော်​​သော Plan(၆)မျိုးကို ​​မှန်​ကန်​စွာေ၇ွးချယ်​နိုင်​၇န်​ တင်​ပြလိုက်​ရပါသည်​...
1.Biz Talk and Text plan (3000)
တစ်လကို ၃ ထောင်ဖြင့်​ ooredoo အချင်းချင်း အကန့်​အသက်​မရှိ စိတ်​ကြိုက်​​ပြော စိတ်​ကြိုက်​ SMS ပို့လို့ ရမဲ့ PLAN ​လေးပါ
လုပ်ငန်းရှင်​ များ Company ၀န်ထမ်းများအတွက်လည်း အလွန်​သက်​သာ​စေမယ့်​ PLAN ​လေးပါ(Unlimited Ooredoo to Ooredoo Call and Unlimited SMS)
2.Biz Light plan (5000)
ooredoo ဖုန်း​ဘေ ၅၀၀၀ ဖြည့်ရုံနဲ့ အပို ၅၀၀၀ ထပ်ရမှာပါ အင်​တာနက်​သုံးဖို့လဲ 500Mbရမှာဖြစ်​သလို ooredooအချင်းချင်းဖုန်း​​ပြောခွင့်​ တစ်​ရက်​ကို မိနစ်​ ၅၀ တစ်​လစာကို မိနစ်​၁၅၀၀ ဖုန်း​ပြောနိုင်​မှာပါ အပိုရတဲ့ ဖုန်း​ဘေ၅၀၀၀ထဲက အခြား Operator ​တွေကို​ဖုန်း​ခေါ်လို့ရသလို package ​တွေထပ်​၀ယ်​လို့ရမှာဆို​တော့ ​အ ဆ ပဲ​နော်​
3.Biz Classic Plan (10000)
တတိယ Plan က​တော့ ဖုန်း​ဘေ ၁၀၀၀၀ ဖြည့်​ရုံနဲ့ အပို ၁၀၀၀၀ ထပ်​ရမှာပါ အင်​တာနက်​ သုံးဖို့လဲ 1500mb လဲမှာပါ ooredoo အချင်းချင်းဖုန်း​ပြောခွင့်​တစ်​ရက်​ကို မိနစ်​ ၅၀ တစ်​လစာက်ို မိနစ်​ ၁၅၀၀ ဖုန်း​ပြောလို့ရမှာပါ အပိုရတဲ့ဖုန်း​ဘေ ၁၀၀၀၀ ထဲက အခြား Operator ​တွေကို​ဖုန်း​ခေါ်နိုင်​သလို package ​တွေထက်​၀ယ်​လို့ရမှာပါ
4.Biz Plus plan (15000)
ဒါက​တော့ Ooedoo ဖုန်း​ဘေ ၁၅၀၀၀ ဖြည့်​ရုံနဲ့ အပို ၁၅၀၀၀ ထပ်​ရမှာပါ အင်​တာနက်​ သုံးဖို့လဲ 2500mb လဲမှာပါ ooredoo အချင်းချင်းဖုန်း​ပြောခွင့်​ တစ်​ရက်​ကို မိနစ်​ ၅၀ တစ်​လစာက်ို မိနစ်​ ၁၅၀၀ ဖုန်း​ပြောလို့ရမှာပါ အပိုရတဲ့ ဖုန်း​ဘေ ၁၅၀၀၀ ထဲက အခြား Operator ​တွေကို​ခေါ်လို့ရသလို package ​တွေထက်​၀ယ်​လို့ရမှာပါ
5.Biz Max Plan (20000)
Ooedoo ဖုန်း​ဘေ ၂၀၀၀၀ ဖြည့်​ရုံနဲ့ အပို ၂၀၀၀၀ ထပ်​ရမှာပါ အင်​တာနက်​ သုံးဖို့လဲ 4000mb လဲမှာပါ ooredoo အချင်းချင်းဖုန်း​ပြောလို့ရ​အောင်​ တစ်​ရက်​ကို မိနစ်​ ၅၀ တစ်​လစာက်ို မိနစ်​ ၁၅၀၀ ဖုန်း​ပြောလို့ရမှာပါ အပိုရတဲ့ ဖုန်း​ဘေ ၂၀၀၀၀ ထဲက အခြား Operator ​တွေကို​ ဖုန်း​ခေါ်ဆို နိုင်​ရုံသာမက package ​တွေလည်းထက်​၀ယ်​လို့ရမှာပါ
6.Biz Extreme Plan (35000)
Ooedoo ဖုန်း​ဘေ ၃၅၀၀၀ ဖြည့်​ရုံနဲ့ အပို ၃၅၀၀၀ ထပ်​ရမှာပါ အင်​တာနက်​ သုံးဖို့လဲ 5000mb လဲမှာပါ ooredoo အချင်းချင်းဖုန်း​ပြောလို့ရ​အောင်​ တစ်​ရက်​ကို မိနစ်​ ၅၀ တစ်​လစာက်ို မိနစ်​ ၁၅၀၀ ဖုန်း​ပြောလို့ရမှာပါ အပိုရတဲ့ ဖုန်း​ဘေ ၃၅၀၀၀ ထဲက အခြား Operator ​တွေကို​ဖုန်း​ခေါ်လို့ရသလို package ​တွေထက်​၀ယ်​လို့ရမှာပါ။တန်​မှတန်​ပဲ​နော်​
ကဲ..အားလုံးပဲ​နော်​ ဒီ​လောက်​အဆင်​​ပြေ​ပြေနဲ့ အသုံးတည့်​​သော Ooredoo Bussiness Sim Card များကို ၀ယ်​ယူအား​ပေးချင်​တယ်​ဆို၇င်​​တော့ 09 - 442595025 အခုပဲ ဆက်​သွယ်​လိုက်​ပါ​နော်​...
? အားလုံးကို ​ကျေးဇူး​တင်​ပါသည်​။ ?
Brand Name Ooredoo B to B
Payment Method Anypay
Delivery Method Yea
4/78 Aug Mingalar Street, Mayangone
Price: MMK 4,000
Hybrid Case UNIO for iPhone 6...